NeChishanu, Nyamavhuvhu 11, 2006 Chipiri, Gunyana 4, 2011 Douglas Karr
CHERECHEDZA: Kana iwe uri kufunga nezvekuita izvi, imwe tsamba yambiro. Google ine zvirevo zvekutumidza mazita neAPI yavo, saka ive shuwa kwete kutsiva izvo zvinosiyana nemamwe mazita! Hazvishande.
Zvino, nezve kuwana tipped. Kana usati waverenga Iyo Tipping Point naMalcolm Gladwell, kuverenga kunonakidza. Ini handidi kuparadza mazwi aVaGladwell, asi zvinonyanya kutaura nezvekuti, kazhinji, zvinoita sekunge pane chinongedzo kune zvisarudzo zvatinoita kana muzviitiko chaizvo zvinoitika mubhizinesi redu nehupenyu hwedu.
Mushure mekuisa kiredhiti kadhi kangu kadhi kuti ndiongorore kutenga kwangu, pakanga paine imwezve cheki bhokisi kwandaigona kubhadhara $ 4.99 kuitira kuti kambani ichengetedze ruzivo rwangu rwekunyoresa kuitira kuti ndikarasa uye ndaida kumisazve uye kunyoresa zvekare chirongwa. Ndakafunga nezvazvo kwemaminetsi mashoma… ndokutarisa bhokisi. Ndakayeuka ndichifanirwa kutumira email kune mumwe mutengesi pandakanga ndarasa kiyi yekunyorera yechikumbiro chavo uye ndaida kuitazve.
Ndakaruma! Ini handimbo nyora nekuvabvunza kiyi, asi ini ndakabhadhara $ 4.99 yekunzwa kwakadziya uko. Ini handina kugumbuka - ndiwo mutengo unonzwisisika wekuchengetedza ruzivo rwangu. Ndiri kushamisika vamwe vatengesi vasingaite izvi futi. Iyi ndiyo mhando yechiitiko icho Gladwell anotaura nezvacho mubhuku rake. Ndakanga ndatotengeswa pasoftware, vakangondibvunza zvimwe zvishoma mushure mekunge ndatozvipira. Zvakanaka!
Aug 1, 2007 pa 7: 28 AM
Gladwell anogona kunge ari kuita chimwe chinhu chakakuunzira kudziya fuzzies, asi icho chinhu, kwandiri, chinofanira kuve chikamu chevashandi vekutanga vatengi. Mufungo wekare wekuita chimwe chinhu mushe uye vanhu vachadzoka mabasa.
Kaviri mune anopfuura makore makumi maviri nemashanu ekushandisa makomputa, ndakafanirwa kubata mutengesi kana software inogadzira kiyi kodhi. Nechimwe chikonzero chisinganzwisisike, iwo makodhi haana kumbozviita muvhavha yangu inogara ichikura yenhamba dzenhamba uye ruzivo rwekunyora rwakachengetwa mudura rakachengetedzeka mune yangu yega ruzivo kuronga iyo yandakashandisa kubvira 25 inonzi Nguva uye Chaos (http://www.chaossoftware.com/ kana iwe uchifarira).
Imwe yemakambani andakaonana nayo yakandipa kodhi yangu - isina nyaya - makore mana mushure mekutanga kutenga. Munguva yemakore mana kubva pakutanga kutenga, ini ndanga ndachinja email vatengi, kukwidziridzwa kune itsva yekushandisa system, uye ndakaita zvimwe zvekutenga kubva kwavari. Chikamu cheiyo "rekodhi yevatengi" iyo kambani inofanira kugara ichichengetedza irwo runyorwa rwemakodhi kana iwe, mutengi vanozvida zvakare.
Kuibhadharira kwakangofanana nemubhadharo makambani mazhinji einishuwarenzi izvozvi vanoedza kubhadharisa yavo inshuwarisi kuti "zvive nyore" zvekugamuchira mapepa or zvemagetsi zvikwereti (hazvisi zvekuzvisarudzira, funga nezvako), pamwe nemubhadharo we "nyore" wekubhadhara cheki ($ 1.25 muripo) kana ye "nyore" yekubhadhara zvemagetsi ($ 1.00 muripo). Mari dzacho dzinosekesa, pazvakanakisa, asi zvinoratidza mabhizinesi achipfuura nemutengo wakajairika wekuita bhizinesi zvakananga, pamwe nemari yepundutso.